नागरिक लगानी कोषद्वारा हालसम्मकै कम लाभांश प्रस्ताव
चैत २३, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लाभांश आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको चैत २१ गते बिहान ७:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ९ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १७ दशमलव ८९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड ६ लाख ९९ हजार रहेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कोषको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि वितरण गर्ने गरी कोषले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
नागरिक लगानीकोषको यस वर्षको लाभांश हालसम्मकै कम रहेको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको लाभांशलाई फर्केर हेर्दा कोषले २३ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको छ । त्यस अघिको वर्षहरुमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कोषले हालसम्मकै उच्च ५० प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ५२ दशमलव ६३ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने कम्पनीले एउटै अनुपातमा अर्थात २२ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ ।
कम्पनीले यस वर्ष गत पुस २८ गतेदेखि माघ १९ गतेसम्म ८२ दशमलव ८४ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गरेको छ । उक्त अवधिमा विक्री हुन नसकेको शेयर लिलामी प्रकृयाबाट विक्री गर्ने कार्यलाई पनि कोषले पूरा गरिसकेको छ ।
कम्पनीले गत फागुन २१ गतेदेखि चैत २ गतेसम्म सर्वसाधारण तर्फको ३ लाख ५४ हजार १५० दशमलव शून्य ५ कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर विक्री गरी चैत १४ गते बाँडफाँट गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. १३ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । यस अवधिसम्म रू. ३२ करोड २५ लाख ९५ हजार खुद नाफा गरेको कोषको रिटर्न अन इन्भेष्टमेण्ट ८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३६ रहेको कोषको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २४८ रहेको छ ।
कोषको विगत पाँच ओटा आर्थिक वर्षको लाभांश विवरण :
स्रोतः सम्बन्धित कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश सूचना